Intel Abuuratay cable ah indhaha in ballan 1.6Tbps - Rule News
Intel Abuuratay cable ah indhaha in ballan 1.6Tbps
CHIPMAKER Intel ayaa sameeyay 800Gbps cable ah indhaha in waxa uu sheegay in kor u bixin doonaa xawaaraha weyn in supercomputers iyo xarumaha xogta marka la bilaabay in qeybtii labaad ee sanadka.
In ku dhawaaqay sheyga ee Fibre indhaha Shirka ee San Francisco, Intel ayaa sheegay in ay ku salaysan waxaa ay technology photonics Silicon jaray, iyo taageerada of tiro ka mid ah ciyaartoyda in industry ee indhaha, oo ay ku jiraan Corning, US Conec, TE xiriiriyaan, Molex iyo kuwa kale.
chipmaker ayaa waxa uu ugu yeerayaa MXC technology isku xira, oo waxaa loogu tala galay sida jaray kharash-ool ah indhaha gudaha xarumaha xogta.
MXC, oo Intel bilaabay sannadkii hore, waa jaray a is haysta in ay taageertaa in 64 fiber, walba kor u waday inay 25Gbps xogta for a total 1.6Tbps bandwidth fog ilaa 300m. Waxaa la horumariyay iyadoo lala kaashaday Corning, kaas oo bixiya fiber ee indhaha Clearcurve loogu talagalay in lagu wada xodan yihiin hareeraha gooladaha adkaynayo badan fiiloyin dhaqanka.
technology waa qayb ka mid ah Intel ee jiilka xiga initiative xarunta xogta loogu magac daray Architecture Miisaanka hayayaashii, kaas oo ujeedadiisu tahay in disaggregate server shaqsi galay balliyo Xisaabiyaan, kaydinta iyo xusuusta heer hayayaashii, la photonics Silicon loo isticmaalo isku xirnaanta gudaha iyo inta u dhaxaysa labada hayayaasha.
In post a on Intel ee blog Data dhoobo, Shirkadda ayaa sidoo kale lagu xusay in Microsoft ayaa ku biiray ay MXC Adopters Forum.
Agaasimaha guud ee Cloud Engineering Server Microsoft ee, Kushagra Kaliya, ayaa sheegay in technology MXC noqon doonaa “xarkaha” qaabaynta jiilka xiga-qabadka sare naqshadaba xarunta xogta.
“Waxaan rajeyneynaa in aan la Intel iyo heerarka furan jirkooda sida OCP shaqeeya si loo dardar-warbixin-qaybsiga iyo ansaxinta warshadaha,” ayuu yiri.
The xaaladaha isticmaalka ugu weyn ee fiilooyinka MXC ka mid ah xiriir dhakhso u dhexeeya top-of-hayayaashii shido iyo barta asaasiga ah, iyo xira server in kaydinta dheeraad ah ama GPUs, Intel yiri.
21775	0 Clearcurve, Corning, xarunta Data, Intel, Microsoft, Molex, MXC, TE xiriiriyaan
← 20 Xallinta Home waxgal Waayo, cagahoodu oo barara Lix maraakiibta Indian geeyay search for jet Malaysia →